Ishibhile esenziwe ngokhanyikhanyi se-aluminium alloy door and windows processing parts ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Ukwakhiwa kweminyango namawindi e-aluminium Izicabha namawindi e-aluminium, ukwakha imboni yamakhethini odonga kuyimboni entsha kakhulu ezweni lethu, kusukela ekuqaleni, kusukela kokuncane kuya kokukhulu, kuzuze ukuthuthuka okusheshayo ngokuxhuma nemingcele.
Aluminium ingxubevange umnyango newindi extrusion
Emashumini ambalwa nje edlule, imboni isebenzise ubuchwepheshe obuthuthukisiwe ukukhuthaza ukulungiswa kwesakhiwo semboni, ukukhuthaza ukuvuselelwa komkhiqizo, ukwenziwa ngcono kwesakhiwo, ukubamba isayensi nobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu, futhi kunciphise igebe ngezinga eliphakeme lamazwe omhlaba. Imboni yezindonga zamakhethini odonga lomnyango wakithi wezwe lakithi ihlangabezane nentuthuko enhle. Iminyango yama-aluminium alloy namawindi kungumkhiqizo wokwakhiwa kwezinto zokwakha zesimanje ezintsha. Zenziwe emazweni athuthukile afana neJalimane, i-United States, ne-United Kingdom ekuqaleni kwawo-1930. Ngoba amaphrofayili e-aluminium alloy alula ezintweni ezibonakalayo, angakhipha amaphrofayli anezimo eziyinkimbinkimbi ezinqamulelayo, ikakhulukazi i-aluminium Ukubukeka okuhle kweminyango yama-alloy namawindi kanye nezakhiwo zawo ezinhle zokwakha kubenze baqinisekiswa ngabadwebi bamapulani.
Izici zephrofayili ye-Aluminium
Ukumelana nokugqwala kwephrofayili ye-Aluminium: Ubuningi bephrofayili ye-aluminium bungu-2.7g / cm3 kuphela, okucishe kube ngu-1/3 wobuningi bensimbi, ithusi noma ithusi (7.83g / cm3, 8.93g / cm3, ngokulandelana). Ngaphansi kwezimo eziningi zemvelo, kufaka phakathi umoya, amanzi (noma amanzi anosawoti), uhlelo lwe-petrochemical neziningi zamakhemikhali, i-aluminium ingakhombisa ukumelana nokugqwala okuhle kakhulu.
Ukuqhutshwa kwephrofayili ye-Aluminium: Iphrofayili ye-Aluminium ivame ukukhethwa ngenxa yokuhamba kwayo okuhle kakhulu. Ngesisekelo sesisindo esilinganayo, ukuhanjiswa kwe-aluminium kusondele ku-1/2 wethusi.
Ukuqhutshwa kokushisa kwe-Thermal: I-conductivity eshisayo ye-aluminium alloy icishe ibe ngu-50-60% wethusi, okulusizo ekwenziweni kokushintshisana kokushisa, ama-evaporator, izinto zokufudumeza, izitsha zokupheka, kanye namakhanda esilinda semoto nama-radiator.
I-non-ferromagnetic: Amaphrofayli e-Aluminium awewona ama-ferromagnetic, okuyisici esibalulekile ezimbonini zikagesi nezikagesi. Amaphrofayli e-Aluminium awashisi ngokuzenzekelayo, okubalulekile ekusetshenzisweni okubandakanya ukuphatha noma ukuxhumana nezinto ezivuthayo neziqhumayo.
Ukusebenza: Ukusebenza kwamaphrofayela e-aluminium kuhle kakhulu. Ezingxenyeni ezahlukahlukene ezikhubazekile zama-aluminium kanye nama-alloys ama-cast aluminium, kanye nasezifundeni ezahlukahlukene la ma-alloys enawo ngemuva kokukhiqizwa, izici zemishini ziyahlukahluka kakhulu, okudinga amathuluzi akhethekile womshini noma ubuchwepheshe.
Ukuzinza: Amandla athile wokuqina, amandla wokukhiqiza, i-ductility kanye nesilinganiso sokuqina somsebenzi esihambisanayo kubusa ushintsho ekuguqulweni okuvumelekile.
Ukuvuselelwa kabusha: I-Aluminium iyaphinde isebenze kabusha, futhi izici ze-aluminium esetshenzisiwe ziphinde zingahlukaniswa ne-aluminium eyinhloko.
Njengoba izingxenye ze-aluminium alloy zingaba sendaweni yokusebenza enomswakama noma zihlanganiswe nezinye izingxenye zezinto ezahlukahlukene, ukuze kuthuthukiswe futhi kuqinisekiswe ukumelana nokugqoka, ukumelana nokugqwala nokubonakala kwezingxenye, izingxenye ze-magnesium alloy kufanele ziphathwe ngaphezulu. I-pretreatment izothinta ukufafazwa okulandelayo. Ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, izingxenye zingangcoliswa ezinye izinto ezinjengamafutha, ama-oxide, izinto zokuthambisa nezinto zangaphandle, futhi lokhu kungcola okusele kumele kususwe.
Ngokuvamile, ukwenziwa kabusha kwezingxenye ze-aluminium alloy kungahlukaniswa ngezigaba ezine: ukuhlanzwa ngemishini, ukuhlanzwa kwe-solvent, ukuhlanzwa nge-lye, nokuhlanzwa kwe-asidi. Lezi zindlela zingasetshenziswa zodwa noma ngokuhlanganiswa. Nakekela ukunikezwa kwempuphu ehuhayo namanzi ngesikhathi senqubo yokupholisha, futhi ukupholisha kufanele kukhanye kakhulu!
Kwenziwe ngentando aluminium ingxubevange umnyango newindi izingxenye extrusion
Ukusetshenziswa Ama-exchangers, ama-evaporator, izinto zokufudumeza, izinto zokupheka, namakhanda we-car cylinder nama-radiator, njll.
Langaphambilini Electroplated aluminium ingxubevange ngomshini izingxenye
Olandelayo: Izingxenye ze-CNC zensimbi ezingenalutho